I-china, eyenziwe ngokwezifiso, i-Wholesale Beauty instrument plastic plastic Suppliers - i-Dongguan Raofeng Plastic Products Co., Ltd.
Ikhaya > Isikhunta Sobuhle Bokunakekelwa Komuntu Isikhunta Sobuhle Bokunakekelwa Komuntu > Ithuluzi lobuhle lepulasitiki
Emotweni yemoto yokuhlanza umoya
Blackhead ukuncela ithuluzi isikhunta plastic
Ithuluzi lobuhle lepulasitiki
High isipiliyoni ukubaluleka isikhunta design nokulawula esiqinile umjovo inqubo yokubumba kunganqoba inkinga yokuthi imikhiqizo enjalo kulula ukuba asonte futhi deform futhi aqinisekise flatness futhi ukuthungwa imikhiqizo.
Izinto zomjovo zenziwe ngezinto zokusetshenziswa ezenziwe ngabakwa-ABS HB ezenziwe nge-Taiwan, eziqinisekiswe ngezinto ezisetshenzisiwe ezisezingeni eliphakeme.
Main processing imishini:i-computer gong, intambo ehamba kancane, umshini we-spark, umshini we-spark spark, umshini wokugaya, umshini wokugaya neminye imishini
Uhlobo lokucubungula ukuhweba:ukucubungula imephu
Uhlobo lwenqubo:umjovo udini
Ububanzi bebhizinisi:ukwakheka kwesikhunta, ucwaningo lwesikhunta nentuthuko, ukukhiqizwa kwesikhunta, ukubumba umjovo, ukuhlangana kwezinsizakalo ezihlanganisiwe.
1. Ukubukeka okubushelelezi
2. Imigqa ecacile nenhle
Isikhunta sokukhiqiza kahle, umkhiqizo womkhiqizo wonke umugqa namakhona ukwenza okucacile futhi okuhle, indawo engaphezulu ibe yemvelo futhi iyiqiniso.
3. Isiphetho sesibuko esiphakeme ngaphezulu
Isikhunta ebusweni isibuko sokupholisha inqubo kanye nenqubo yokubumba umjovo ngokubambisana okuseduze, ukuze isicwebezelisi somkhiqizo sifeze ukuthungwa kwemvelo nokungokoqobo.
4. Ukulawulwa kwenqubo okuqinile
Usayizi wenqubo yokubumba umjovo ulawulwa ngokuqinile ukuqinisekisa umphumela wokuthungwa ophelele womhlangano womkhiqizo.
5. Izinto ezisetshenzisiwe kumkhiqizo
Umsebenzi wokuklama onamandla, olula futhi osebenzayo, umsebenzi wokusebenza womkhiqizo wokuphila isikhathi eside muhle, muhle futhi uhlala njalo, akulula ukulimaza
I-RAO FENG: Amandla aphezulu wezobuchwepheshe aqinile, sinamandla ocwaningo oluzimele nentuthuko
I-RAO FENG: Ithimba lensizakalo enamandla ngemuva kokuthengisa, ukuze ungabi nazinkathazo
Ukwenza isikhunta kuhlanganisa:
1) Ikhasimende linikeza imidwebo ye-3D / 2D, futhi siyenza ngokuya ngemidwebo enikezwe ikhasimende.
2) Ikhasimende linikeza kuphela ukubukeka kokubukeka, sakha imidwebo ye-3D / 2D, bese senza isikhunta ngokuya ngemidwebo eqinisekiswe yikhasimende.
Sicela usazise ngezidingo ezenziwe ngezifiso ngokuningiliziwe
Okokusebenza: Izakhiwo ezibonakalayo - imininingwane
Ukucaciswa komkhiqizo nesimo sokusetshenziswa
Izidingo Zokusebenzisa Ezilindelwe
Oda okungu-50% wenani langempela
Hlaziya inqubo yokwakha umkhiqizo, isakhiwo sesikhunta kanye nenqubo yokukhiqiza. Qinisekisa impilo yesikhunta ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Yakha isakhiwo esiphelele sesikhunta nezingxenye zokucubungula, bese ubeka phambili izidingo zomhlangano nezidingo zenqubo yokubumba.
Ngaphambi kokuvula isikhunta, hlaziya ngokugcwele ukukhubazeka kwekhwalithi yezingxenye zepulasitiki (ezinjengezinga lokuncipha, njll.) Noma izinkinga zesakhiwo sesikhunta (njengokumiswa komhlaba, ukusethwa kwesango, isiqiniseko sempilo yesikhunta, njll.).
Ukubukeka kwesikhunta: ukubonakala kwesikhunta kufanele kuqinisekiswe ukuthi akunakho ukugqwala, ukushayisana, okungaphelele nokunye ukukhubazeka kwemodyuli.
Ukuthuthwa kwesikhunta: ukuthuthwa kwesikhunta kufanele kulayishwe ishidi lokukhiya isikhunta, ukufakwa kunamandla nobufakazi bokugqwala.
Imininingwane Isikhunta: ngesikhathi esifanayo ukulethwa isikhunta, ahlinzeke iqoqo isikhunta bafake izingxenye kanye nokugcinwa inkomba izinto.
UKUKHOKHWA & UKUTHUNYELWA
Amathegi ashisayo: Ithuluzi lobuciko lepulasitiki, iChina, elenziwe ngokwezifiso, i-Wholesale, abahlinzeki, i-Buy, i-Quotation